Tuesday April 28, 2020 - 12:31:26 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Khudbad Video ah oo uu baahiyay Telefeshin ay maalgeliso dowladda Imaaraatka Carabta ayuu Khaliifa Xaftar ku sheegay in uu yahay xaakimka dhabta ah ee wadanka Liibiya isagoo goodis hor leh udiray wax uu ugu yeeray Argagaxiso iyo calooshood ushaqeystayaal.
"Hoggaamiyaha dhabta ah ee wadanka Liibiya waa aniga mas'uuliyadda muwaadiniinta Liibiyana aniga ayay qoorta iisaarantahay" sidaas waxaa yiri Khaliifa Xaftar.
Iclaaminta ka timid dagaal oogahan ayaa kusoo aaddaysa maalmo kadib markii guuldarrooyin is xigxigay ladhaxal siiyay maleeshiyaadkiisa ka dagaallamaya jiidda magaalada Daraabulis.
Waxa loogu yeero beesha caalamka oo ay ugu horreeyaan Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa ismagacaabista Xaftar kasoo hor jeestay waxayna sheegeen in ay taageerayaan wadahadallo dhaxmara dhinacyada isku haya maamulka Liibiya.
Sidoo kale Jeneraal Xaftar ayaa sheegay in uu ka baxay heshiis Sukheyraat ee ka dhacay dalka Marocco sanaddii 2015, dagaal ooge Xaftar ayaa muddo 6 sanadood ah dagaal ugu jira sidii uu uqabsan lahaa Liibiya isagoo kaashanaya dowlado reergalbeed ah iyo qaar kamid ah dowladaha khaliijka carabta oo ay ugu horreeyaan Imaaraatka iyo Sacuudiga.